လျင်မြန်စွာ rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > လျင်မြန်စွာ rotary လျှပ်စစ် actuator
လျင်မြန်စွာ rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး လျင်မြန်စွာ rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် တွင် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ။ AOX ရှိပါတယ် ဖူး ကတိသစ္စာပြု သို့ အဆိုပါ ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော AOX-R ကို ကို စီးရီး လျင်မြန်စွာ rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် ထိန်းချုပ်မှု equipment.It ဖြစ် thဖြစ် အောင်မြင်သော positionတွင်g နှင့် အားကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး အသိအမြင် ၏ အားလုံး ဖြစ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ ထို ကြောင့် AOX တစ်ဦး ကုန်သွင်းသူ ၏ vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ဖြေရှင်းချက်။
ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်: ပွင့်လင်း / နီးကပ် / မှတ်တိုင်၏ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုဖု, အနီးကပ်ထိန်းချုပ် switch ကိုဖုအဝေးထိန်း / ဘတ်စ်ကားထိန်းချုပ်မှု (Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော)
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ကိုစီးရီး၏ shell ကိုအစာရှောင်ခြင်း rotary လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. စက် Self-သော့ခတ်: တိကျမှန်ကန်သောတီကောင်နှင့်ပိုးဂီယာလွှဲပြောင်း Self-သော့ခတ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့လိမ်အားမြင့်မားထိရောက်မှု, ပြောင်းပြန်လှန်တားဆီး။
3. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: Precise ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်း rotary လျှပ်စစ် actuator အဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝအာမခံပါသည်။
AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်း rotary လျှပ်စစ် actuator အရည်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့, မှုန်သို့မဟုတ်အမှုန်များ၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရေပေးဝေရေး, မိလ္လာကုသမှု, ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ, ပိုက်လိုင်းများ, သန့်စင်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော operate ။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်း rotary လျှပ်စစ် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်း rotary လျှပ်စစ် actuator ။
မေး: မာယာ ia haveâ AA lookâ ATA yourâ catalog?
မေး:? youâa/ â ITA AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်း rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် Thea priceâ AA နည်းနည်းlowerâthatâ ITA possibleâ ISA much.âyouââကdiscountâကာနtooâ ISA?
ဖြေ IFA yourâorderâ ISA bigâအလုံအလောက်တစ်weâourâစျေးနှုန်းreconsiderâမာယာ။
hot Tags:: လျင်မြန်စွာ rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်